Na-egbu ọchụ na Nicky Verstappen - Jos Brech PsyOp: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ Gbanwee NICKY, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 29 August 2018	• 1 Comment
The Netflix usoro 'Ime onye na-egbu ọchụ'na-egosi otú ndị mmadụ pụrụ isi nọgide na-adabere ná nkwubi okwu ọjọọ ruo ọtụtụ afọ. Ebe DNA na usoro isiokwu a na-abụkarị ihe mgbapụta, DNA pụkwara ịbụ ụkpụrụ ọhụrụ Ime onye na-egbu ọchụ dabeere. N'ime ọrụ uche (PsyOp) ị hụ na ndị mmadụ na-emetụ mmetụta, ka ị wee kpasuo mmeghachi omume nke na-achọ iwu ọhụrụ. Ị nwere ike iji mgbasa ozi gị kpọọ ndị ahụ, dịka ọmụmaatụ, ikpe ikpe. Anyị nwere Peter R. de Vries maka nke ahụ.
Ị nwekwara ike ịmepụta mmeghachi omume mmeghachi omume n'onwe gị. Ị na-eme nke a site na otu Peter R. de Vries, akwụkwọ akụkọ na akụkọ. Ị na-etinye ihe osise nke onye na-achọ ịchụ nta nwa na-agba mbọ ịzo n'ime ọzara. Mgbe ahụ, ị ​​hụ na onye ọ bụla na-ahụ ihe ngwọta na okwu bụ isi DNA. Mgbe ahụ, i nwere ike ime ngwa ngwa ime iwu ọhụrụ nke ihe ndị iwu na-akwadobeghị, na mberede ga-ekwe omume. Otu ihe atụ nke a bụ na ị nwere ike ime ka ọ bụrụ iwu na ị ga-ewere DNA ma ọ bụ nweta ya n'ụlọ mmadụ. Ihe atụ ọzọ bụ na ị nwere ike ịgbanwe iwu nke na-ekwu na ị nwere ike iji akaụntụ DNA maka ikpe metụtara ya. N'ezie, ị ga - ahọrọ ịga otu ọnọdụ ebe ị nwere DNA nke mba dum na nchekwa data ma ị nwere ike iji DNA n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla. Na onye na-emegide ya mgbe ihe mmetụta uche dị otú a? Ọ dịghị onye ọ bụla!
Kedu ka ị ga - esi mara onye obi ebere? Ọ bụrụ na e nwere ihe ndị yiri ka ọ dịkarịa ala na - ọ bụrụ na ịnọghị n'okpuru usoro mgbasa ozi hypnosis - ọ dịkarịa ala mee ka ị na-eche "Hey, nke ahụ bụ nnọọ ihe ọzọ!". Ma echegbula na mgbasa ozi na-abịa ugboro ugboro site na azịza dị mma, nke mere na ị ga-amalite ikwere na PsyOp ọzọ. Ihe kpatara na anyị nwere ike ikwu na enwere ike inwe ihu na ihu na Nicky Verstappen ikpe bụ PsyOp n'ihi na ihe niile na-egosi na ọ dịghị iwu ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma otú nke ahụ bụ, ị ga-ebu ụzọ gaa ihe bu nke a agụ.
DNA bụ ụzọ ọhụrụ nke ndị uweojii na ikpe ziri ezi na onye ọ bụla jupụtara otuto! Ọ bụghị n'ihi na ọ bụ iwu kwadoro ma ọ bụ n'ihi na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, mana n'ihi na ọ na-eweta site na mgbasa ozi. Ka anyi dokwuo anya: ịchọta DNA n'anụ ahụ ma ọ bụ uwe na-ekwu ihe ọ bụla karịa na a chọtara DNA na ya. Ajụjụ bụ otú o si bịa. Ya mere, ọ bụ mgbe ahụ ka ọ dị mkpa ịkwado nkwado ahụ. Ị bụ taa na kọfị onye agbata obi na echi ya anwụọla n'ụlọ ya, mgbe ahụ enwere ohere buru ibu na DNA gị dị na ya ma ọ bụ uwe. Ndi oro ọwọrọ ke afo ama owot enye? Ee e, onye agbata obi nwere ike ịbụ onye jidere obi ma ọ bụ onye ọzọ nwere ike igbu ya. Mkparịta ụka autopsy aghaghị igosi ihe kpatara ọnwụ bụ. Ọ bụrụ na e mebeghị ihe kpatara ọnwụ a, Peter R. de Vries na-akpọ na mgbasa ozi na mberede na ọ dị ka onye agbata obi gị na-egbu ya, n'ihi na DNA gị nọ na uwe ya, ị na-ama ụda dị ka plọg. Ị na-atụ anya ka ị na-atụgharị uche maka ihe ndị na-akpata ụdị mgbasa ozi nwere ike imetụta gị n'ọdịnihu?
Ma nke a bụ nwa nwoke sitere na 11 ma a na-ekwukwa banyere mmegbu! Ị na-eburu n'uche na o nwere ike ịbụ na e nwere PsyOp? Nke ahụ nwere ike ịpụta na a na-eji skeji (cat cat) mee ihe ọ bụla ma ọ bụ na a họọrọ mmadụ iji kpọọ onye na-eme ihe site na njirimara aka. Ime onye na-egbu ọchụ.
Ihe dị ịrịba ama bụ na ndị uweojii na-abịa ugbu a na nkọwa dị mkpa site na weebụsaịtị 1Limburg.nl. Chief (Aha ndị dị oké mkpa) Jan Eland rụrụ ụka na otu onye nwere ike ịjụ inye DNA bụ DNA nke Jos Brech ike dakọtara na DNA na uwe nke Nicky Verstappen ndị òtù ezinụlọ nke anọ na nke ise n'ezinụlọ. Ya mere, nke ahụ aghaghị ịbụ ihe otu n'azụ-n'azụ-n'azụ-cousin ma ọ bụ son-of-the-daughter-of-the-backneef-of-Jos ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ. Na DNA ahụ ga-emepụta 100% egwuregwu (lelee vidiyo maka oge ma gụọ n'ihu n'okpuru vidiyo).
"N'ikpeazụ, ndị ikom abụọ si na nke anọ na nke ise na-arịọ ka ha jiri aka ha tinye DNA na nnyocha Nicky Verstappen. Ndị ikom a rụkọtara ọnụ, ọ gbakwara bụrụ egwuregwu zuru ezu na ọdịdị dị n'ahụ Nicky Verstappen, "ka onyeisi ndị isi bụ Jan Eland kwuru megide L1. (see okwu 1Limburg.nl)
Ị nwere echiche ọ bụla nhụsianya dị na nhịahụ a na-ewu ewu? Ọ bụrụ na DNA nke ndị ikom a emepụtala 100% egwuregwu, ha nwere ike ịbụ ndị na - eme ihe! Otu egwuregwu zuru oke pụtara na DNA gị na-ejikọta DNA ahụ (na ihe a na-adịghị edozi). Ihe ga-ekwe omume bụ na DNA nwere 'nhata' na nke a, nke nwere ike iduga na ntụgharị uche na ntụziaka nke Jos Brech, mana onye isi a na-ekwu banyere otu egwuregwu zuru ezu. Ya mere ugbu a, anyị nwere 3 perpetrators nke a gburu mgbe (n'ihi na ọ bụghị gosiri site otopsii site NFI) na n'ụzọ mmekọahụ na mgbe ahụ (n'ihi na ọ bụghị gosiri site otopsii site NFI). E kwuwerị, dịka okwu ndị ahụ si kwuo, enwere egwuregwu zuru ezu na ụmụ nwoke abụọ ahụ sitere na nke anọ na nke ise na ezinụlọ Jos Brech.
Biko marakwa okwu na-esonụ n'ime otu isiokwu na 1Limburg gbasara Jos Brech:
.. dị ka onye na-agafe na mpụ ahụ hụrụ na na n'oge gara aga na-etinye aka na mmekọahụ mmekọahụ
Ọ bụrụ na ị tinyela aka na ikpe, ma a gaghị ama gị ikpe, ị bụghị onye mmejọ. Ihe ị bụ bụ onye nwatakịrị nwoke na-enwe mmekọahụ na-ekpebi ikpe ụlọ Peter R. de Vries. Ihe oyiyi nke Jos Brech ka a gbagoro ruo ebe dị elu ma ezinụlọ chọrọ ile anya anụ ọhịa a n'anya! O doro anya na o mere ya! Nso ke enye akanam? Jos Brech bụ onye ogbugbu nke igbu ọchụ na-akwadoghị na onye na-akwa iko na-emegbu onwe ya. "Ee, ma Peter R. de Vries na-ekwu na e gburu Nicky ma jiri ya mee ihe!"Ee, nke ahụ bụ ihe Peter R. de Vries kwuru, nke ahụ bụ ihe ndị ọkachamara na-arụ ọrụ OM na-ekwu na nke ahụ bụ ihe mgbasa ozi mgbasa ozi na-ekwu. M na-agwa gị na ọ dị mfe dịka Ọmịiko.
Naanị otu ihe doro anya bụ na a ga-etinye iwu ọhụrụ ka ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-ekpochapụ DNA ha nakwa na a pụrụ iji DNA a mee ihe n'ụzọ iwu na ebe niile. Onye obi ebere na-amata gị site na nchịkwa ebe enwere nsogbu, mmeghachi omume na-akpata ma emesị gosipụta ihe ngwọta na ị nwerelarịrịrịrị: Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta.
Site ugbu a gawa, ị na-etinye ntutu isi na globa mgbe gị na onye agbatao gị na-aga kọfị?
Ihe ndekọ njikọ njikọ: 1limburg.nl
Tags: DNA, agba, hoax, Jan Eland, Jos Brech, egbu egbu, Nicky Verstappen, Peter R. de Vries, psyop
30 August 2018 na 10: 41
Ihe kpatara ọnwụ enweghị ike ikpebi ọzọ; a na-ajụkwa ịkwa iko. Ọnụ ọgụgụ zuru ezu na-ebili banyere nyocha ọhụrụ na oge ọnwụ.
" Jos Brech bụ 100% onye na-egbu mmadụ ma na-akwa iko nke Nicky Verstappen ma bụrụ nke a ga-ejikọta n'ihu ọha!
DNA okwu anwansi nke na-edozi onu ogugu na igbu onwe ya! »
Nleta nile: 16.030.470